Xannaanada Dadyowga Dhimirka Beela - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xannaanada Dadyowga Dhimirka Beela
La daabacay torsdag 5 april 2012 kl 15.42
Hayadda maamulka bulshada ee Socialstyrelse ayaa barnaamij ay maalintii isniintii soo saartay ku fartay degmooyinku iney ka howl-geliyaan shaqaale ku filan goobaha xanaaneeynta ee dadyowga dhimirka beela waxa afkan iswiidhishka lagu yiraahdo Demens.
- Wuxuu u muuqdaa qorshe aan si dhab ah looga baaraan-degin, waana mid aan shaki ka qabo in aannu wax wayn u soo kordhin doonin sida tala-galkoodu yahay. Waa howl ey shaqaale badan ee xafiisyada ka shaqeeyaa soo qiimeeyn doonaan baahida dhimir-laaweyaasha. Maadaama xaaladda dadyowgaasi yihiin kuwo is bedbedela. Maalin ayaa laga yaabaa in baahida shakhsigu badan tahay maalinna ka yar tahay. Sidaa daraadeed ayey noola muuqataa in hayaddu waajabiso tiro shaqaale ee joogto ah. Iyo sidoo kale masuuliyiin goobta xannaanada ku sugan ee qiimeeya baahida, islamakaana howsha u kala qorsheeya.
2% ayaa ku qanacsaneeyn shaqaalaha ka howlagala goobaha lagu xannaaneeyo dadyowga dhimirka beelay sannadkii 2003 mar ay hayadda hoggaanka bulshadu su'aalo middaa ka wadeeysiisay 130-ka urur ee ey ku mideeysan yihiin qaraabada dadyowga dhimirka la'. Halka isla ururka daladda dhimr-laaweyaashu sannadkii 2011 weeydiimo noocaasiya ku ogaaday in 8% aaney ku qanacsaneyn tirada shaqaalaha goobahaa ka howl-gala qaraabada dadyoowgaa.
Hayadda maamulka bulshada ayaa qorshaheeda ku soo jeedisay in goobaha lagu xanaaneeyo bukaankaa laga howl-geliyo shaqaale ku sugan habeenkii oo dhan, halka degmooyinkana ay hayaddu ku waajibineeyso iney bukaan walba ku sameeyaan baaritaan shakhsi ah, midkaasina lagu ogaanayo taageerada uu/ay u baahan yahay/tahay.
Wilhelmina Hoffman, hor-joogaha xarunta iyo hor-u-marinta howlaha dhimir-laaweyaasha ayaa qabta iney ka mid yihiin qorshaha hayadda maamulka Bulshad qodobbo wanaagsan, hase yeeshee loo baahan yahay tallaabooyin iyo shaqaale ka howl-gala xarumaha lagu xannaaneeyo:
- Waxaan xaqiiqdii arkay goobo ey ka howl-galaan shaqaale aan ku filleeyn, halka degmooyinkuna ey dhimayaan dhaqaalaha lagu miisaaniyad geliyo. Waa laba arrimmood oo aan is keeneyn. Waxaan garansannahay sidii howlahaa wax looga qaban lahaa hase yeeshee aan dhabbadoodii lagu jirin.
- Gaar ahaan waxey degmooyinku aad hoos ugu dhimeen miisaaniyaddii goobaha xannaanada dhimir-laawe-yaasha iyadoona aan laga fekerin in dadyowgaasi u baahan yihiin daryeel aad u ballaaran, sidii ey nolol caadiya ugu noolaan lahaayeen. Waana howl uu dhaqaale ku baxayo. Waxaa maanta jira suurtagal ah in daryeelka xannaano iyo gacan-gaqabadka dadyowgaa sida uu iminka yahay laga wanaajiyo. Waana mid suurtagal ah haddii habka ugu wanaagsan loo qaabilo in aaney howlahaa ku bixi doonin dhaqaale sidaa u fara badan, sida ay sheegtay Wilhelmina Hoffman, hor-joogaha xarunta dadyowga dhimirka beela.
Waa la qiyaasayaa iney dalka ku dhaqan yihiin 150 000 oo ruux oo dhimir beelay. Halka 24 000 oo dadyowgaa ka mid ahina ku dhaqanaayeen goobaha lagu xanaaneeyo koowdii bishii oktoobar ee sannadkii 2010.
Codkii ka horeeyay ee aad maqleeyseenna waxay ahayn: Wilhelmina Hoffman, hor-joogaha xarunta iyo hor-u-marinta howlaha dhimir-laaweyaasha.
Isha: Hayadda maamulka bulshada Socialstyrelsen.